Female Condom Diaphragm - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျတားနညျးတှထေဲကမှ ဇနီးမောငျနှံတှေ အသုံးပွုကွတဲ့နညျးလမျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ…ထို့ပွငျ ယခုခတျေကာလအရ ခဈြသူရညျးစားတှမှော ပိုပှငျ့လငျးရဲတငျးလာကွတာမို့ အခဈြနှယျကှံခြွငျး(သို့)ကာမဆကျဆံခွငျး အရာမွောကျကွတဲ့အထိ ရှိပါတယျ…ဒီအခါမှာ မဖွဈသငျ့တာတှေ မဖွဈရလအေောငျ ကာကှယျတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲမှာ အမြိုးသမီးသုံးကှနျဒုံး(female condom diaphragm ) လညျး တဈခု အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ…..
အလှာပါး ဆီလီကှနျနဲ့ ပွုလုပျထားပွီး ခပျတိမျတိမျ ခှကျပုံစံလေးတဈခုပါ…. ထိုပစ်စညျးအား မိနျးမကိုယျထဲ ထညျ့ကာ သားအိမျခေါငျးအဝထဲသို့ သုတျပိုးမြား မဝငျစရေနျ ကာကှယျပေးတဲ့ သန်ဓတေားပစ်စညျးတဈမြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ.. ” အမြိုးသားသုံး ကှနျဒုံးကဲ့သို့ မဟုတျပဲ ပွနျလညျအသုံး ပွုလို့ရသော ပစ်စညျး တဈမြိုး ဖွဈပါတယျ”
ဘယျလို အသုံးပွုပါလိမျ့ ?
” အသုံးမပွုခငျမှာ ဆရာဝနျ (သို့) နာ့ဈ ဆီမှ အသုံးပွုနညျးကို သခြော သငျယူပါ.. မိမိကိုယျတိုငျ လကေ့ငျြ့ပါ.. ပွီးမှ သခြောစှာ ထညျ့သှငျး အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ… ဒ့ါပွငျ ဘူးအခှံမှ အသုံးပွုနညျးကိုလညျး သခြောဖတျပွီး သုံးပါ”… မှားယှငျးသော အသုံးပွုပုံကွောငျ့ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျလို့ပါ..
ပထမဆုံး မိမိ၏ လကျကို သနျ့စငျအောငျ ဆေးကွောပါ
spermicide လို့ချေါတဲ့ သုတျပိုးကို သစေတေဲ့ cream သို့ gel အနညျးငယျကို အမြိုးသမီးသုံးကှနျဒုံးခှကျကလေးထဲသို့ ထညျ့ပါ
သကျတောငျ့သကျသာအနအေထား ဥပမာ – ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျးခွငျး သို့ လှဲလြောငျးခွငျး ပုံစံရှိပါစေ…လစဉျသုံးပစ်စညျးtampon ထညျ့သကဲ့သို့ မှတျယူလို့ရပါတယျ
လကျတဈဖကျမှ မိနျးမကိုယျအဝကို သခြောဖွဲထားပါ.. ကနျြလကျတဈဖကျမှ ခေါကျထားသော diaphragm၏ထိပျအနားဝိုငျးလေးကို ညဈထားပွီး အထဲသို့ ထညျ့ပါ..
မိနျးမကိုယျထဲရောကျနိုငျသမြှထိ ထညျ့ပါ. ခှကျကလေးဟာ အောကျဖကျစိုကျ အနအေထားလေး ဖွဈနပေါ့လိမျ့မယျ…ဘေးအနားမြားကို ဆီးခုံရိုးနောကျထဲသို့ တှနျးပါ… သားအိမျခေါငျးအဝကို သခြော ဖုံးအုပျမိရပါမညျ…
လိငျမဆကျဆံခငျ နှဈနာရီလောကျကရငျး ထိုပစ်စညျးကို ထညျ့ထားလို့ရပါတယျ.. အကယျ၍မြား နှဈနာရီအထကျကြျောသှားလြှငျ သုတျပိုးကိုသစေသော spermicide gel ကို ထညျ့ဖွညျ့သငျ့ပါတယျ… ထိုပစ်စညျးအား ပွနျမထုတျခငျ ထပျမံ လိငျဆကျဆံလြှငျလညျး မိနျးမကိုယျထဲသို့ spermicide gel ထပျထညျ့ကာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
မိနျးမကိုယျထဲမှာ ခွောကျနာရီကွာလောကျ အသုံးပွုနိငျပါတယျ.. ထိုပစ်စညျးကို မိနျးမကိုယျထဲတှငျ ၂၄ နာရီထပျ ပိုမထားမိပါစနှေငျ့… ထပျမံလိငျဆကျဆံလြှငျ ပစ်စညျးအသဈကို အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ..
” ပွနျထုတျပါက ခှကျ၏ အနားစကို လကျဖွငျ့ ဖွညျးညငျးစှာ ကုတျယူပွီး အပွငျကို ထုတျလို့ရပါတယျ”…
ထုတျယူပွီးပါက ထိုပစ်စညျးကို ရနှေေး၊ ဆပျပွာနှငျ့ သခြောစှာ ဆေးကွောပါ..
powder မဖွနျးပါနဲ့.. တခွားသော ရောဂါပိုးမှားမြား ဝငျနိုငျပါတယျ..
သနျ့ရှငျးသော နရောတှငျသိမျးပါ.. အပူကဲသော နရော (သို့) နရေောငျတိုကျရိုကျမထိပါစနေဲ့
ပွီးလြှငျ ထိုပစ်စညျးတှငျ အပေါကျအပွဲ ရှိသလား? လြော့ရဲနသေလား ? အစရှိသညျကို ရထေညျ့၍ စမျးသပျလို့ရပါတယျ.. အကယျ၍ စိတျမခရြပါက အသဈတဈခု အသုံးပွုရပါမယျ.. အသုံးပွုရငျ ခကျခဲသေးပါက တခွားသော အမြိုးသားသုံး ကှနျဒုံး (သို့) တားဆေး တဈခုခု ကို သုံးထားသငျ့ပါတယျ…ဤနညျးအားဖွငျ့ မလိုအပျသော ကိုယျဝနျကို တားနိုငျပါတယျ..
ဒါဆိုရငျ အမြိုးသမီးတို့ အနဖွေငျ့ ဘယျလိုအသုံးပွုရမညျကို ဗဟုသုတ အဖွဈ သိရပွီမို့ ကနြေပျကွမညျ ထငျပါတယျ
female condom diaphragm ရဲ့ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးမြား နဲ့ အသုံးဝငျပုံမြားကိုတော့ အပိုငျး(၂) အနနေဲ့ ဆကျလကျရေးသားသှားမှာမို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွပါဦးနျော….
အမျိုးသမီးသုံး ကွန်​ဒုံး အပိုင်း(၁)
ကိုယ်​ဝန်​တားနည်း​တွေထဲကမှ ဇနီး​မောင်​နှံ​တွေ အသုံးပြုကြတဲ့နည်းလမ်း​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်​…ထို့ပြင်​ ယခု​ခေတ်​ကာလအရ ချစ်သူရည်းစား​တွေမှာ ပိုပွင့်​လင်းရဲတင်းလာကြတာမို့ အချစ်​နှယ်​ကျွံခြင်း(သို့)ကာမဆက်​ဆံခြင်း အရာ​မြောက်​ကြတဲ့အထိ ရှိပါတယ်​…ဒီအခါမှာ မဖြစ်​သင့်​တာ​တွေ မဖြစ်​ရ​လေ​အောင်​ ကာကွယ်​တဲ့ နည်းလမ်း​တွေထဲမှာ အမျိုးသမီးသုံးကွန်​ဒုံး(female condom diaphragm ) လည်း တစ်​ခု အပါအဝင်​ ဖြစ်​ပါတယ်​…..
အလွှာပါး ဆီလီကွန်​နဲ့ ပြုလုပ်​ထားပြီး ခပ်​တိမ်​တိမ်​ ခွက်​ပုံစံ​လေးတစ်​ခုပါ…. ထိုပစ္စည်းအား မိန်းမကိုယ်​ထဲ ထည့်​ကာ သားအိမ်​​ခေါင်းအဝထဲသို့ သုတ်​ပိုးများ မဝင်​​စေရန်​ ကာကွယ်​​ပေးတဲ့ သ​န္ဓေတားပစ္စည်းတစ်​မျိုးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​.. ” အမျိုးသားသုံး ကွန်​ဒုံးကဲ့သို့ မဟုတ်​ပဲ ပြန်​လည်​အသုံး ပြုလို့ရ​သော ပစ္စည်း တစ်​မျိုး ဖြစ်​ပါတယ်​”
ဘယ်​လို အသုံးပြုပါလိမ့်​ ?
” အသုံးမပြုခင်​မှာ ဆရာဝန်​ (သို့) နာ့စ်​ ဆီမှ အသုံးပြုနည်းကို ​သေချာ သင်​ယူပါ.. မိမိကိုယ်​တိုင်​ ​လေ့ကျင့်​ပါ.. ပြီးမှ ​သေချာစွာ ထည့််သွင်း အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်​… ဒ့ါပြင်​ ဘူးအခွံမှ အသုံးပြုနည်းကိုလည်း ​သေချာဖတ်​ပြီး သုံးပါ”… မှားယွင်း​သော အသုံးပြုပုံ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရသွားနိုင်​လို့ပါ..
ပထမဆုံး မိမိ၏ လက်​ကို သန့်​စင်​​အောင်​ ​ဆေး​ကြောပါ
spermicide လို့​ခေါ်တဲ့ သုတ်​ပိုးကို ​သေ​စေတဲ့ cream သို့ gel အနည်းငယ်​ကို အမျိုးသမီးသုံးကွန်​ဒုံးခွက်​က​လေးထဲသို့ ထည့်​ပါ
သက်​​တောင့်​သက်​သာအ​နေအထား ဥပမာ – ​ဆောင့်​​ကြောင့်​ထိုင်းခြင်း သို့ လှဲ​လျောင်းခြင်း ပုံစံရှိပါ​စေ…လစဉ်သုံးပစ္စည်း​​​tampon ထည့်​သကဲ့သို့ မှတ်​ယူလို့ရပါတယ်​
လက်​တစ်​ဖက်​မှ မိန်းမကိုယ်​အဝကို ​သေချာဖြဲထားပါ.. ကျန်​လက်​တစ်​ဖက်​မှ ​ခေါက်​ထား​သော diaphragm၏ထိပ်​အနားဝိုင်း​လေးကို ညစ်​ထားပြီး အထဲသို့ ထည့်​ပါ..
မိန်းမကိုယ်​ထဲ​ရောက်​နိုင်​သမျှထိ ထည့်​ပါ. ခွက်​က​လေးဟာ ​အောက်​ဖက်​စိုက်​ အ​နေအထား​လေး ဖြစ်​​နေပါ့လိမ့်​မယ်​…​ဘေးအနားများကို ဆီးခုံရိုး​နောက်​ထဲသို့ ​​တွန်းပါ… သားအိမ်​​ခေါင်းအဝကို ​သေချာ ဖုံးအုပ်​မိရပါမည်​…
လိင်​မဆက်​ဆံခင်​ နှစ်​နာရီ​လောက်​ကရင်း ထိုပစ္စည်းကို ထည့်​ထားလို့ရပါတယ်​.. အကယ်​၍များ နှစ်​နာရီအထက်​​ကျော်​သွားလျှင်​ သုတ်​ပိုးကို​သေ​စေသာ spermicide gel ကို ထည့်​ဖြည့်​သင့်​ပါတယ်​… ထိုပစ္စည်းအား ပြန်​မထုတ်​ခင်​ ထပ်​မံ လိင်​ဆက်​ဆံလျှင်​လည်း မိန်းမကိုယ်​ထဲသို့ spermicide gel ထပ်​ထည့်​ကာ အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​..
မိန်းမကိုယ်​ထဲမှာ ​ခြောက်​နာရီ​ကြာ​လောက်​ အသုံးပြုနိင်ပါတယ်​.. ထိုပစ္စည်းကို မိန်းမကိုယ်​ထဲတွင်​ ၂၄ နာရီ​ထပ်​ ပိုမထားမိပါ​စေနှင့်​… ထပ်​မံလိင်​ဆက်​ဆံလျှင်​ ပစ္စည်းအသစ်​ကို အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်..
” ပြန်​ထုတ်​ပါက​ ခွက်​​၏ အနားစကို လက်ဖြင့်​ ​ဖြည်းညင်းစွာ ကုတ်​ယူပြီး အပြင်​ကို ထုတ်​လို့ရပါတယ်​”…
ထုတ်​ယူပြီးပါက ထိုပစ္စည်းကို ​ရေ​နွေး၊ ဆပ်​ပြာနှင့်​​ ​သေချာစွာ ​ဆေး​ကြောပါ..
powder မဖြန်းပါနဲ့.. တခြား​သော ​ရောဂါပိုးမွှားများ ဝင်​နိုင်​ပါတယ်​..
သန့်​ရှင်း​သော ​နေရာတွင်​သိမ်းပါ.. အပူကဲ​သော ​နေရာ (သို့) ​နေ​ရောင်​တိုက်​ရိုက်​မထိပါ​စေနဲ့
ပြီးလျှင်​ ထိုပစ္စည်းတွင်​ အ​ပေါက်​အပြဲ ရှိသလား? ​လျော့ရဲ​နေသလား ? အစရှိသည်​ကို ​​ရေထည့်​၍ စမ်းသပ်​လို့ရပါတယ်​.. အကယ်​၍ စိတ်​မချရပါက အသစ်​တစ်​ခု အသုံးပြုရပါမယ်​.. အသုံးပြုရင်​ ခက်​ခဲ​သေးပါက တခြား​သော အမျိုးသားသုံး ကွန်​ဒုံး (သို့) တား​ဆေး တစ်​ခုခု ကို သုံးထားသင့်​ပါတယ်​…ဤနည်းအားဖြင့်​ မလိုအပ်​​သော ကိုယ်​ဝန်​ကို တားနိုင်​ပါတယ်​..
ဒါဆိုရင်​ အမျိုးသမီးတို့ အ​နေဖြင့်​ ဘယ်​လိုအသုံးပြုရမည်​ကို ဗဟုသုတ အဖြစ်​ သိရပြီမို့ ​ကျေနပ်​ကြမည်​ ထင်​ပါတယ်​
female condom diaphragm ရဲ့ ​ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ နဲ့ အသုံးဝင်​ပုံများကို​တော့ အပိုင်း(၂) အ​နေနဲ့ ဆက်​လက်​​ရေးသားသွားမှာမို့ ​စောင့်​​မျှော်​ဖတ်​ရှုကြပါဦး​နော်​….